के सञ्जुले सञ्जय दत्तलाई सफाइ दिएको हो?
बलिवूड अभिनेता सञ्जय दत्त भारतकै सबैभन्दा विवादास्पद चलचित्र अभिनेता हुन्। रक्सी र लागुऔषधको उनको कुलत, उनका प्रेम सम्बन्धहरू र आतंकवादसम्बन्धी सबैभन्दा नराम्रो मुद्दामा उनले पाएको सजाय पर्याप्त रुपमा अभिलेखीकरण भएका छन्। तर हालै उनको जीवनीमाथि केन्द्रित रहेर सार्वजनिक भएको एउटा चलचित्रले उनको अँध्यारो विगतलाई ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप खेपिरहेको छ भन्छिन्, अर्पणा अल्लुरी।
तर चलचित्र समीक्षकहरूले यसलाई 'झूटो' र 'भ्रामक' भनेका छन्।
चलचित्र हेरेका कतिपयले यसलाई 'देवत्वकरण' भनिरहेका छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा 'जनसम्पर्क अभियान' पनि भनेका छन्।
अर्का समीक्षकले दत्तको व्यक्तित्व गहिरो रुपमा हेर्ने एउटा अवसर गुमेको भन्दै 'चलचित्र सकिँदा वास्तविक सञ्जु कस्ता छन् भन्ने प्रश्नवाचक चिह्न कायमै रहेको' टिप्पणी गरेका छन्।
चलचित्रमा मुख्य 'खलपात्र' बनाइएका सञ्चारमाध्यमले आफूलाई गलत रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको ठान्ने सञ्जयले आफ्नो कथालाई न्याय गर्न सक्ने जीवनी लेखकको उनले खोजी गरिरहेको देखाइएको छ।
सन् २०१७ मा एउटा सार्वजनिक मन्तव्य दिने क्रममा उनले भनेका थिए, "मैले सेवन नगरेको लागुपदार्थ विश्वमा छैन।"
आफैँ सचेत कुनै पनि चलचित्रले एके-फीफ्टी सिक्स र 'आत्मरक्षा' बीचको सम्बन्धबारे के रहेछ भन्ने पहिल्याउने प्रयास गर्ने थियो।
समाचारको चक्र माफी दिन नसकिने खालको हुनसक्ने स्वीकार गर्दै एकजना समीक्षकले लेखेका छन्, "उक्त तर्क कहिल्यै समाप्त नै नहुने गरी प्रयोग गरिएको छ। जस्तो कि त्यसले के छनक दिन्छ भने यदि पत्रपत्रिकाहरू थप जिम्वेवार भइदिएका भए सञ्जुले दु:ख नै पाउनुपर्ने थिएन।"
बीबीसी एसिया नेटवर्कका हारुन रसिदसँग चलचित्रका निर्देशक राजकुमार हिरानीले भनेका छन्, "तपाईँले एउटा व्यक्तिको जीवनलाई अढाई घण्टाको कथामा समेट्नुछ भने तपाईँले के सान्दर्भिक छ भनेर छान्नुपर्ने हुन्छ।"
"मैले उनलाई गिरफ्तार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई भेटेको छु। त्यसपछि मैले उनको पक्षमा वकालत गर्ने सबै वकिलहरूलाई पनि भेटेको छु।"
"मैले धेरै पत्रकारहरूलाई पनि भेटेको छु, ४० देखि ५० जनालाई भेटेर, उनीहरूका कथा सुनेर मैले त्यसलाई कथामा ढालेको हुँ।"
तर यसले एउटा स्वभाविक प्रश्न उठाइदिएको छ: "के बलिवूडले आफैँबारे एउटा वास्तविक र पूर्वाग्रहरहित आत्मकथामा चलचित्र बनाउनसक्छ?" (बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
२०७५ असार २४ आइतबार २२:३२:०० मा प्रकाशित